Versiondị mbụ nke Microsoft Edge maka Linux ga-abata na Ọktọba | Site na Linux
Microsoft ekwuputala na ya nke mbụ chịkọtara de Microsoft Edge maka Linux ga-abata ọnwa na-abịa dị ka nyocha.
Mbugharị na chromium kwere ka Microsoft mee Edge a obe-nyiwe nchọgharị, so the aplicación ọ bụ dị na Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 na macOS.
Microsoft kwadoro nke ahụ a mbipute nke Edge maka Linux ọ bụ na-emepe emepe, ma ụlọ ọrụ ọ chọghị ikwu maka ụbọchị ọ ga-ewepụta ya.
Nchịkọta nke a ga-ahapụ Osote izu ga-abịa dị ka otu mbipute nyocha mbụ, ebe Microsoft ga-anọgide na-arụ ọrụ na mmepe maka nsụgharị ndị ọzọ. Edge maka Linux nwere ike ibudata na otu ebe dịka nsụgharị Windows na MacOS.
Microsoft ekwubeghị ọtụtụ ihe banyere Microsoft Edge maka Linux, mana ọ dị mfe ịkọ nke ahụ ụlọ ọrụ ahụ ga-anwa ịgbakwunye otu atụmatụ ahụ dị ka nsụgharị Windows.
Microsoft Edge maka Linux na mbipute ya gara aga ga-ebipụta na saịtị Microsoft Edge Insider ma enwere ike itinye ya na ndị njikwa ngwugwu iji mee ndozi mee ka ọ dị mfe.
Ebumnuche Microsoft bụ ịnweta nzaghachi dị ka o kwere mee site n'aka ndị na-anụ ọkụ n'obi na ndị ọrụ toro eto na-anwale ngwa ahụ tupu ahapụ ya. ugbua la mbipute ọgwụgwụ, ikekwe mmalite 2021.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Versiondị mbụ nke Microsoft Edge maka Linux ga-abata na Ọktọba
N'ịtụle na m hapụrụ Windows n'ihi na ịntanetị dị egwu, amaghị m etu m ga-esi nwalee ihe nchọgharị Microsoft na gburugburu Linux mgbe ọtụtụ afọ gasịrị.
Zaghachi Arturo Javier Ducoing Ortiz
Na Linux enwere ọtụtụ ihe nchọgharị na-etinye ọnụ n'ụzọ zuru oke na sistemụ na-enweghị mkpa ịwụnye nke ọ bụla na Microsoft. Enweghị mkpa na obodo ajụbeghị maka ya. Ọ gaghị atụnye ụtụ n’ihe ọ bụla ndị dị ugbu a na-anaghịzi arụ. Peroooo ... n’ụwa a enwere mmadụ maka ihe niile ma ụfọdụ ga-akụ aka.